Maamulka gobolka Sh/dhexe oo ugu baaqay hay’adaha samafalka in ay gacan siiyaan dadka ku nool gobolka – idalenews.com
Maamulka gobolka Sh/dhexe ayaa ugu baaqay hay’adaha samafalka ee inay wax u qabtaan shacabka ku nool gobolka Sh/dhexe.
Kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Yuusuf Cabdi Cabdulle oo wareysi gaar ah siiya shabakada warbaahinta Idalenews.com ayaa waxaa uu ka warbixiyay xaalada guud ee dadka ku dhaqan gobolka Sh.dhexe.
Yuusuf Cabdi (Yuusuf Jaalle) ayaa waxa uu sheegay in ammaanka xarunta gobolka Sh.dhexe ee Jowhar ay tahay mid aad u wanaagsan isla markaana la isku haleyn karo.
“Waxaan dhisnay guddiyo xaafadaha ka shaqeeya waxana lagu guuleystey in ammaanka uu noqdo mid wanaagsan.” Ayuu yiri Yuusuf Jaalle. Kusimaha guddoomiyaha gobolka ahna guddoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasada ayaa waxa uu sheegay in maadaama ammaanku uu wanaagsan yahay laga doonayo hay’adaha samafalka ee heer caalami iyo heer dalba in shacabka gobolka laga kaalmeeyo sdii ay dib ugaga soo kaban lahayeen dhibaatooyinkii ay afartii sano ee la soo dhaafay ay u geyseen ururka Alshabaab.
Sidoo kale kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh.dhexe ayaa ugu baaqay qurbo joogta ka soo jeeda gobolka Sh.dhexe in ay gacan ka geystaan sidii loo horumarin lahaa gobolka Sh.dhexe. waxana uu kusimaha maamulka gobolka Sh.dhexe uu rajo weyn ka muujiyay in gobolku uu noqon doono mid tusaale u noqda gobolada kale ee dalka Soomaaliya.
Degmada Jowhar ee xarunta gobolka Sh.dhexe ayaa u muuqda in haatan si tartiib tartiib ah uu isbedel uga dhacayo waxaana magaalada haatan dib ugu soo laabtay dadweyne faro badan oo hore ugaga barakacay.
Xafiis loogu talagalay koontaroolka alaabta ka soo dagtay dekadda oo laga furay dekadda Muqdisho